Faahfaahin khasaarihii ka dhashay soo dhawayntii musharax Dr ; Maxamed Cabdulahi Farmaajo ee Muqdisho oo soo badanaya. – Radio Daljir
Faahfaahin khasaarihii ka dhashay soo dhawayntii musharax Dr ; Maxamed Cabdulahi Farmaajo ee Muqdisho oo soo badanaya.
Agoosto 9, 2012 8:48 b 0
Muqdisho, 09-Aug- Wararkii ugu danbeeyay ee aynu ka helayno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ku soo waramaya inuu khasaaraha ka dhashay israsaasayn dhex martay dad soo dhawaynayay Dr; Farmaajo iyo ciidan ka tirsan dawladda uu ka badan yahay tiradii horay ay warbaahintu u baahisay.
Maxamuud Maxamed Xasan oo ka mid ahaa ergadii ansixisay dastuurka Soomaaliya maantana goob-joog u ahaa soo dhawayntii musharax Farmaajo oo waraysi siiyay Radio daljir ayaa sheegay inuu indhihiisa ku arkay saddex qof oo mayd ah ayna jiraan dad kale oo dhaawaca oo la geeyay cisbitaalada Muqdisho.
Maxamuud ayaa sheegay in israsaasaynta ay ka bilaabatay ka dib markii dad wata calanka madaxweynaha ay soo dhex galeen taageerayaasha ra,iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo oo aad u badnaa ayna mashquul noqdeen dhamaan jidadka Muqdisho, rasaasta sadexda qof ay ku dhinteen qaar kalana ay ku dhaawacmeen ayaa la sheegay inay is dhaafsadeen askar ka tirsan dawladda iyo taageerayaal so dhawaynayay Musharax Farmaajo.
Ergaygaan ayaa dhinaca kale waxaa uu Daljir u sheegay in Musharaxani uu badalay dhaqdhaqaaqyadii musharaxiin badan oo ku sugan Muqdisho oo ay ugu horeeyaan madaxda dawladda,” Runtii waxaa is badalay dhaqdhaaqyadii iyo halganadii loogu jiray doorashada, horay muqdisho inteeda badan darbiyada waxaa ku dhaganaa musharixiintii horay u joogay caasimadda balse maanta wax walba waa ay is badaleen waxaana meel walba ku dhagan Sawirka Farmaajo, waxaan oran karaa waa ninka ugu taageeraha badan musharaxiinta”, Ayuu hadalkiisa ku soo koobay? Mr Maxamed.
Warsaxaafadeed Golaha wasiirada oo ka shiray xaaladdaha amaanka iyo isbedalada siyaasadeed ee dalka
Khudbadii R/Wasaare Gaas ee iclaaminta murashaxnimada xilka Madaxweynanimada Soomaaliya